वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई टिप्स
वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि परिवारसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ । विदेशमा जाँदा नेपालको तुलनामा कति बढी कमाइ हुन्छ र कति खर्च हुन्छ त्यसबारे लेखाजोखा गर्नुपर्छ । आफूले निभाइरहेको पारिवारिक जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने र कसरी परिवारको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सीप सिकेर मात्र जानुपर्छ । सीप सिकेर जानेले बिनासीपमा जानेले भन्दा तलब र सुविधा धेरै पाउने गर्छन् ।
दलालको फन्दामा महिला
रोजगारीका लागि जापान जाने हो भने सजिलै पठाउन सकिने आश्वासन पाएपछि झापा, सतासीधाम–८ की २८ वर्षीया सन्चरानी पोङ्हाङ्ले दलाललाई ६ लाख रुपैयाँ खुरुक्क बुझाइन् । रकम नपाउँदासम्म जापानको रोजगारी बारेमा सधैँ बखान गरिरहने दलालले रकम कुम्ल्याएपछि भने सन्चरानीलाई भेट्नै छाडे ।आज/भोलि भन्दै पाँच महिनासम्म दलालले सन्चरानीलाई जापान नपठाएपछि यतिखेर उनी आफू ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा दलाल मनकुमार तुम्वापोलाई कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएकी छिन् ।
महिलालाई वैदेशिक रोजगारीः कुन उमेरमा ठीक ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको उमेर कति हुुनुपर्छ ? वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले १८ वर्ष उमेर पुगेका जो कोहीले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यही मापदण्ड वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकमा खोजियो भने गलत साबित हुन्छ । सरकारी निकायको अन्योल र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बनाएको नियमका कारण १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै महिलाहरू आफूले चाहेको देशमा रोजगारीका लागि जान पाउँदैनन् ।
काेरिया काममा जानेलाई टिप्स
वैदेशिक रोजगारीमा कोरिया जान खोज्नेलाई यसपटक सोही अनुसार टिप्स दिएका छौं । कोरिया जान १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण मात्र नगरी कोरियाको मानव संशाधन विभागले निर्धारण गरेको संख्यामा पर्नुपर्छ ।
डेनमार्क जान खोज्नेलाई टिप्स
डेनमार्क जान खोज्नेलाई निम्न टिप्स उपयोगी हुन सक्छन् ।डेनमार्क उत्तरी युरोप र उत्तरी एटलान्टिकको नर्डिक देश हो । नर्डिकका पाँच वटा देशमा डेनमार्क, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, नर्वे र स्वीडेन तथा तिनीहरूका स्वायत्त प्रदेश एलाण्ड, आइसल्याण्ड, फारो आइसल्याण्ड र ग्रीनल्याण्ड पनि पर्छन् ।
साउदी अरेबिया काममा जानेलाई सल्लाह
कामका लागि साउदी अरेबिया जान खोज्नेलाई निम्न टिप्स उपयोगी हुन सक्छ । साउदी अरेबिया गर्मी हुने देश हो । साउदीको न्यूनतम तापक्रम १५ र अधिकतम तापक्रम ५० डिग्रीसम्म हुन्छ । ठूलो संख्याका नेपाली कामदारले घरबाहिर काम गर्नुपर्ने हुँदा गर्मीको अत्यधिक महसुस हुन्छ ।
इजरायलबाट केयरगिभरको माग आएन
रोजगारीका लागि इजरायल जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि सुःखद समाचार छैन । झन् इजरायल जानकै लागि केयरगिभर लगायतको तालिम लिइसक्नु भएको छ भने खर्च भइसकेको रकम पनि कसरी उठाउने भन्ने समस्या अघिल्लतिर आइपुगेको छ ।
इजरायल काममा जानेलाई टिप्स
वैदेशिक रोजगारीमा केयरगिभरका लागि इजरायल जान खोज्नेलाई यसपटक सोही अनुसार टिप्स दिएका छौं । इजरायको केयरगिभरमा जान २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । केयरगिभर सम्बन्धी तीन महिने तालिम लिएको हुुनुपर्छ ।
चाडपर्वले रोकेन विदेशिन
यतिखेर नेपाली समाज चाडपर्वमा डुबेको छ । दसैं सकिएलगत्तै तिहार, छठजस्ता चाडपर्व नेपालीको घरघरमा प्रवेश गरिसकेको छ । लामो समय बाहिर बसेकाहरू धमाधम घर फर्किरहेका छन् । गच्छेअनुसार हरेक परिवारले आफूले सकेको खर्च गरिरहेका छन् ।
नवलपरासी, मध्यविन्दु–४ की ६२ वर्षीया यमकुमारी भुसालको आँखामा आँशु नरोकिएको महिनौं भयो । रोकियोस् पनि कसरी विदेशी भूमिमा कमाउन गएको छोरा उतैको जेल परेपछि यतिखेर यी वृद्धालाई के गरौं र कसो गरौं भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन हुँदै
लामो रस्साकस्सीपछि बल्ल वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन हुने भएको छ । २०६४ मा तयार गरिएको ऐन संशोधन नहुँदा कामदारले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको गुनासो व्याप्त छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
जर्मनी जादैं हुनुहुन्छ ?
जर्मनीको उच्च सीप, श्रम शक्ति, कम भ्रष्टाचार र उच्च तहको नवीन पद्धति सहितको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । युरोपमा सबभन्दा ठूलो र शक्तिशाली अर्थतन्त्र जर्मनीको छ । जर्मनी युरोपमै परिस्कृत यातायातको केन्द्र भएको मुलुक हो ।
कोरियामा किन नेपालीले आत्महत्या गर्छन् ?
रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका नेपालली आत्महत्या गर्ने क्रम नरोकिएपछि प्रश्न उठेको छ– रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका युवायुवती किन आत्महत्या गर्छन् भन्ने ।सन् २०१७ सकिन चार महिना बाँकी रहँदाको अवधिसम्म कोरियामा १७ जनाको मृत्यु हुँदा चार जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
काममकाे लागि काेरिया जाँदै हुनुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा कोरिया जान खोज्नेलाई यसपटक सोही अनुसार टिप्स दिएका छौं । कोरिया जान १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । कोरियाका राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् ।
घट्दैछन् विदेशमा ज्यान गुमाउने
वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारका लागि खुसीको खबर छ किनभने पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवती सुरक्षित हुन थालेका छन् । उनीहरूको आकस्मिक मृत्युको दर घट्दै जान थालेको देखिएको छ ।
बढी रेमिट्यान्स कतारबाट
अघिल्लोझैँ आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा पनि नेपालमा सबभन्दा बढी रेमिट्यान्स कतारबाट भित्रिएको छ । नेपालले प्राप्त गरेको कुल रेमिट्यान्समा कतारको हिस्सा ३१.६ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।